တူနာ ပန်ကိတ် | Wutyee Food House
« အီတလီစတိုင် Lasagna ခေါက်ဆွဲ
May 7, 2012 by chowutyee တူနာ ပန်ကိတ်
ဆား (salt) ♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် (black pepper)♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ကြက်ဥ (egg) ♦ ၂လုံး
နှမ်းဆီ (seasame oil) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ဂျုံမှုန့် (flour) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး တူနာကို စည်သွပ်ဗူးထဲမှ မထုတ်ခင် စည်သွပ်ဗူးထဲမှ ပါသောအရည်များကို စစ်ထုတ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီမှ တူနာများကို လက်ဖြင့်ဖွချေပြီ ဇလုံတစ်ခုထဲ ထည့်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီလျှင် ဇလုံထဲသို့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော (တူနာ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ကြက်ဥ၊ နှမ်းဆီ၊ ဂျုံမှုန့်) တို့ကို ထည့်ပြီ လက်ဖြင့် သမအောင် ရောနယ်လိုက်ပါ။
၄။ ရောနုယ်ထားသော တူနာများကို ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း အ၀ိုင်းပြားလေးများ လုပ်ပေးပါ။
၅။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း) ခန့်ထည့်ပြီ တူနာများကို အညှိရောင်သန်းသည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
၆။ ကျက်လျှက်ပြန်ဆယ်ထားပေးပြီ တူနာပန်ကိတ်ကို နေ့လည်အစာပြေအဖြစ် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
on May 7, 2012 at 3:07 pm | Reply Cho Wut Hmone
ta kar ma ma eat buu buu…tal tal kaung mae pone bae naw… lote sar kyi own mal
haa It is easy one, try it my lovely twin!🙂
on May 8, 2012 at 12:21 am | Reply Aye myat
I will try it..look like delicious
Yeah it is, try it Ma!😛
on May 8, 2012 at 8:44 am | Reply tin tin hla
koung ba koung ba…thz wut hmone
on May 10, 2012 at 2:50 am | Reply chowutyee
Haa I m wut yee, my twin is wut hmone!! But it is ok🙂
on May 8, 2012 at 9:26 am | Reply ခင်ယမုံ
တူနာစည်သွပ်ဗူးက အထဲမှာ အနှစ်တွေနဲ့ချက်ထားပြီးသားလား..အနှစ်မပါပဲ ချက်ဖို့အဆင်သင့်လုပ်ထားတာလား ?
on May 10, 2012 at 2:53 am | Reply chowutyee
စည်သွပ်ဗူးထဲက တူနာက တ၀က်ပဲ ကျက်သေးတယ်။ ရိုးရိုး တူနာစည်သွပ်ကို ၀ယ်ရမှာပါ၊ ဟင်းချက်ထားတဲ့ တူနာဗူးတွေ မဟုတ်ဘူး.. လုပ်စားကြည့်နော် မခင်ယမုံ..🙂
on May 8, 2012 at 10:19 am | Reply zarni
လုပ်စားကြည့်တော့မယ် မမရေ တူနာဆိုကြိုက်တယ် တူနာနဲ့လုပ်လို့ရတာလေးတွေတင်ပေးပါဦးနော်
on May 10, 2012 at 2:54 am | Reply chowutyee
on May 9, 2012 at 1:09 am | Reply Leo Mark
အာလူး ကက်သလိပ်လို မျိုးလေးပဲနော်… တူးနား ကက်သလိပ် လို့ခေါ်ပြီးနာမည် တစ်မျိုးနဲ့ လုပ်စားအုံးမှ ပဲ ဟီးးး
on May 10, 2012 at 3:03 am | Reply chowutyee
့ဟားဟား။ တူနာ ကကတ်သလိပ် နံမည်လေးလည်း ဆိုးဘူး ကောင်းသားပဲ။ လုပ်စားကြည့်နော်
on May 9, 2012 at 5:56 pm | Reply sumyat
Thank ma wutyee I will try
Plz try it sis!😀
on May 9, 2012 at 6:01 pm | Reply sumyat
How about salmon I Don’t have tuna right now.
on May 10, 2012 at 3:09 am | Reply chowutyee
salmon နဲ့တော့ လုပ်လို့ အဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူး.. sis..
on May 10, 2012 at 3:00 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] May 7, 2012 တူနာ ပန်ကိတ် […]